UGoogle usungule i-SDK entsha yeKhadibhodi kaGoogle kunye neVR Jonga i-iOS | IPhone iindaba
UGoogle usungule i-SDK entsha ye-iOS yekhadibhodi kunye nombukeli weVR kumaphepha ewebhu
UGoogle upapashe ungeniso kwibhlog yabo ebhengeza ukumiliselwa kwento abayibize ngokuba "ngumjongi weVR" abanokuthi umxholo wabo abaphuhlise amaphepha ewebhu. Kwangelo xesha ubhengeze i ukukhutshwa ngokusemthethweni kweKhadibhodi ye-SDK yakho ye-iOS, eya kuthi ivumele abaphuhlisi be-iOS ukuba babethelele umxholo weVirtual Reality (VR) kwizicelo zabo xa bejongwa besebenzisa isixhobo seGoogle.
Ukuphehlelelwa ngokusesikweni kweKhadibhodi ye-SDK ye-iOS kuqinisekisa injongo yenkampani ngoku eyinxalenye yeAlfabhethi yokuzisa iNyaniso eyiyo kuwo onke amaqonga. Bayikhuphile iCarboard SDK njengefayile Cocoapod, eya kuthi iqinisekise ukuba abaphuhlisi bahlala besebenzisa ezona khowudi zihlaziyiweyo. Ukongeza, ikwabandakanya izixhobo ezininzi eziza kunceda ukwenza isoftware Eyona nyaniso, kubandakanya ukulinganiswa kwe-3D, ukulandelela intshukumo yentloko, kunye nesandi somhlaba.
Eyona nyani iza kuza kwi-iOS isuka kwikhadibhodi
Kwiposti yebhlog leyo li papashwe UGoogle ubhengeza olu phehlelelo sinokufunda ukuba «Abaphuhlisi, ukuba nezinto zokuntywila kwii -apps zabo kunye namaphepha ewebhu kunokuba ngumahluko phakathi kwe 'meh' (ubungakanani) nomlingo. Kungenxa yoko le nto sizise iVR Viewer- indlela ekhawulezayo nelula yokufaka umxholo wokuntywila kwiwebhu, i-iOS kunye ne-Android.«.
Ikhadibhodi kaGoogle SDK ngoku iyafumaneka nge-iOS (ukusuka LAPHA) kunye Android (ukusuka LAPHA), Ngelixa umboniseli weVR kunye nomxholo onokufakwa kumakhasi ewebhu ziyafumaneka kwiGoogle's GitHub (ukusuka LAPHA). Okusalayo ukubonwa kukuba kuthatha ixesha elingakanani ukuba ababhekisi phambili benze ii -apps ezifanelekileyo. Ngokwam, andikhohliswanga ngumbono wokunxiba olu hlobo lwesixhobo sincanyathiselwe ebusweni bam kodwa, njengoko ndihlala ndisitsho, naluphi na ukhetho olungahlaliyo kwelinye icala lwamkelekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » UGoogle usungule i-SDK entsha ye-iOS yekhadibhodi kunye nombukeli weVR kumaphepha ewebhu
Kubonakala ngathi uyalithanda igama "embed" ...
Chomp, ukudala izigcawu ezihlekisayo kunye nenkqubo yeveki
IOS 9.3.1 yokukhuphela amakhonkco